Eshibhile Ishidi lensimbi izingxenye laser cutting ifektri kanye nabaphakeli | I-Ouzhan
Sebenzisa ugongolo lwe-laser enamandla amakhulu ukukhanyisa impahla ezosikwa, ukuze into isheshe ishisiswe ekushiseni kwe-vaporization, futhi ihwamuke yakha izimbobo. Njengoba ugongolo luhamba entweni, izimbobo ziqhubeka zakha izigaxa ezinobubanzi obuncane kakhulu (cishe ngo-0.1 mm). Qedela ukusikwa kwendaba.
Umakhi wensimbi wensimbi wokusika inqubo-inkambiso ngokunemba ishidi lensimbi yokucubungula
I-Ouzhan ikunikeza uhla lwesicelo somshini wokusika we-laser wensimbi: i-aerospace, ukwakhiwa kwemikhumbi, imishini yezolimo, imishini yokunemba, imishini yokuvikela imvelo, imishini yezokwelapha, imishini yokuqina, ifenisha nemishini yasendlini, i-kitchenware, izinto zikagesi, amalambu nezibani, izikrini, ubuciko bensimbi, i-aluminium Ingxibongo, udonga lwe-aluminium, ikhabethe likagesi, imboni yezimoto, umkhakha wokukhangisa, ukucutshungulwa kwensimbi nezinye izimboni. Umshini wokusika we-laser ungacubungula: i-carbon steel, insimbi engagqwali, i-silicon steel, i-spring steel, i-alloy steel, i-manganese alloy, i-titanium alloy, i-aluminium, i-aluminium alloy, i-aluminium ipuleti, ipuleti lashukumisa, ipuleti ye-electrolytic, ipuleti le-pickling, ithusi nezinye izinto.
Izinzuzo ze-Ouzhan sheet sheet laser cutting parts
- Ukucubungula okungenantambo
- Ukusonteka okuncane kwemigqa emincane
- Umbala omsulwa ngokwedlulele
- Amandla aphezulu kakhulu wamandla
- Kuhlanzekile, kuphephile futhi akunangcolisi
Ouzhan OEM ngokwezifiso ishidi lensimbi laser cutting service-China Shanghai ishidi laser ukusika izingxenye umkhiqizi
I-Ouzhan ngumkhiqizi ohlanganisa imboni kanye nezohwebo, enikezela ngosizo olulodwa lokuguqula nokwenza izinsizakalo zomshini wokugaya umshini. Ngokuya ngezidingo zamakhasimende, ephezulu-ngokunemba ishidi lensimbi laser cutting izingxenye ngekhwalithi ezinzile nethembekile zingacutshungulwa. Lezi zingxenye zemishini zenziwa kusetshenziswa izinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu zokusetshenziswa, ezitholakala kubahlinzeki bezingxenye ezisebenza kahle emakethe. Ithimba lethu lobuchwepheshe eliqinile nelingcweti kanye nokuphathwa kahle nokusebenza kwesistimu kungaqinisekisa ukukhiqizwa okuphelele kwezingxenye zensimbi yensimbi yensimbi yokusika. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo yensimbi yokusika i-laser yensimbi inikeze ngokuqinile izindinganiso zekhwalithi futhi ingasetshenziswa ezinhlelweni ezahlukahlukene zezimboni. Futhi singahlinzeka ngamanani entengo wokuncintisana wensimbi yokusika i-laser yensimbi nemikhiqizo yokusika i-laser kumakhasimende ethu abalulekile.
Izinzuzo sheet sheet laser ahlabayo
⑴ Usebenzisa uhlelo lokusika i-laser olunezinhlangothi ezintathu noma ulungiselela irobhothi lezimboni ukusika amajika ezindawo, ukuthuthukisa isoftware yokusika enzinhlangothi ezintathu ukusheshisa inqubo kusuka ekudwebeni kuya ezingxenyeni zokusika.
To Ukuze uthuthukise ukusebenza kahle kokukhiqiza, cwaninga futhi uthuthukise amasistimu wokusika ahlukahlukene akhethekile, amasistimu wokuhambisa izinto, izinhlelo ezihamba phambili zezimoto, njll., Futhi isivinini sokusika sohlelo lokusika seludlule ku-100m / min.
To Ukuze wandise ukusetshenziswa kwemishini yobunjiniyela, imboni yokwakha imikhumbi, njll., Ukushuba kwensimbi yensimbi ephansi kudlule u-30mm, futhi kunakwe kakhulu ucwaningo ngenqubo yobuchwepheshe yokusika i-carbon carbon steel ne-nitrogen ukuze ithuthukiswe ikhwalithi yokusika yokusika amapuleti aminyene. Ngakho-ke, ukwandisa inkambu yezimboni yokusika kwe-CO2 laser cutting eChina nokuxazulula izinkinga ezithile zobuchwepheshe ezinhlelweni zokusebenza ezintsha kusesezihloko ezibalulekile zonjiniyela nabachwepheshe.
Yiziphi izicelo zensimbi yensimbi yensimbi yokusika
Ukusika kwe-Metal: Ukusika kwe-Laser kungathola ukusika okuhlanzekile, okushelelezi nokuqina kunokucubungula ngomshini. Njengomshini, ingacushwa futhi iqondiswe yikhompyutha, okusho ukuthi umshini wokusika we-laser ungakha ngokuzenzakalela inani elikhulu lezinsimbi zezimboni ezifana nezimoto namakhompyutha.
Insimbi ekhanyayo: Ukukhanya okubonisiwe ngeke kulimaze ikhebula elibonakalayo. Izinsimbi ezifana ne-aluminium, isiliva, ithusi negolide konke kuyakhombisa futhi kubalulekile ekukhiqizeni izimoto kanye ne-semiconductor.
Isayensi Yezokwelapha: Ukusika i-Laser nakho kudlala indima ebalulekile embonini yezokwelapha. Emkhakheni wezokwelapha, ukucacisa okuphezulu ngokweqile nokubekezelelana okuqinile kubalulekile. Ngenxa yesidingo somkhakha wezokwelapha sokukhiqizwa kwevolumu ephezulu, lobu buchwepheshe buhlangabezana nezidingo zabo ngoba bungaphinda imidwebo, ngokunembile nangokushesha.
Izinhlobo eziningi zamadivayisi ezokwelapha zivela ekusikeni i-laser, kusuka kumadivayisi wenhliziyo nemithambo kuya ezingxenyeni zokufakelwa kokuhlinzwa. Ngokusika i-laser, lawa madivayisi angenziwa ngejubane elisheshayo ngaphandle kokunikela ngokunemba.
Izinzuzo ze-Ouzhan sheet sheet laser cutting service
- Konke ukusika kwensimbi yensimbi ngokunemba kungaphansi kokuhlolwa kwekhwalithi eqinile.
- Ngokuya ngemidwebo noma amasampula wokwenza insimbi eqondile yensimbi yensimbi yokusika.
Langaphambilini OEM ishidi izingxenye eguqa
Olandelayo: Ishidi ngokwezifiso laser ukusika izingxenye